ဖုန်း: 86-510-87976997/0086 13861515998
Yixing Cleanwater ဓာတုပစ္စည်း Co. , Ltd.
မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်စက်တင်ဘာလမြှင့်တင်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုကျင်းပခဲ့ပြီးအောက်ပါ ဦး စားပေးလုပ်ငန်းများကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ Water Decoloring Agent နှင့် PAM ကိုလျှော့စျေးဖြင့်အတူ ၀ ယ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတွင်အရောင်အလှဆင်သည့်ကိုယ်စားလှယ်များတွင်အဓိကအမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်။ Water Decoloring Agent CW-08 ကိုအဓိကအားဖြင့်သုံးသည်။
စက်တင်ဘာ ၀ ယ်ဈေးပွဲတော်၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတွင်အဓိကအားဖြင့်ရေဆိုးသန့်စင်သည့်ဓာတုပစ္စည်းများနှင့်ရေဆိုးသန့်စင်မှုစမ်းသပ်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ချိန်သည်စက်တင်ဘာ ၂၊ ၂၀၂၁၊ နံနက် ၉: ၀၀ မှ ၁၁: ၀၀ ဖြစ်သည်၊ ဤသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုက်ရိုက် link ဖြစ်သည် https://watch.alibaba.com/v/785bf2f8-afcc-4eaa-bcdf-57930 .။
21-08-26 တွင် admin မှ
မင်္ဂလာပါ၊ ၎င်းသည်တရုတ်မှ cleanwat ဓာတုထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကအာရုံစိုက်သည်မိလ္လာအရောင်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်။ ငါတို့ကုမ္ပဏီရဲ့အဓိကထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ DADMAC နဲ့မိတ်ဆက်ပါရစေ။ DADMAC သည်မြင့်မားသောသန့်ရှင်းမှု၊ စုစည်းထားသော quaternary ammonium ဆားနှင့်မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆ cationic monomer တို့ဖြစ်သည်။ သူ့ရဲ့အသွင်အပြင်က ...
Heavy Metal Remove Agent အကြောင်းလေ့လာရန်အစည်းအဝေး
21-08-12 တွင် admin မှ
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ထုတ်ကုန်သင်ယူမှုအစည်းအဝေးတစ်ခုကိုစီစဉ်ခဲ့သည်။ ဤလေ့လာမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအတွက်အဓိကအားဖြင့် Heavy Metal Remove Agent ဖြစ်သည်။ ဒီထုတ်ကုန်မှာဘယ်လိုအံ့သြစရာတွေရှိလဲ။ Cleanwat cW-15 သည်အဆိပ်မရှိ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်ဖက်သောလေးလံသောသတ္တုဖမ်းစက်ဖြစ်သည်။ ဒီဓာတုပစ္စည်းဟာတည်ငြိမ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်စေနိုင်တယ်။
တရုတ် Paint Mist Coagulating Ab Agent
21-08-05 တွင် admin မှ
ဆေးသုတ်မြူမှု (Clean mist flocculant) အတွက်ဆေးသုတ်အစိုဓာတ်ကိုဆေးသုတ်ရာတွင်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်အေးဂျင့် A & B. Agent A ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အရောင်၏ viscosity ကိုဖယ်ရှားရန်သုံးသောအထူးကုသမှုဓာတုတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ပိုလီမာ။ ရေထဲသို့ပြန်ထည့်သောအခါ ...
တရုတ် Poly Dadmac
ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များ၊ အပြိုင်အဆိုင်ဈေးနှုန်းနှင့်အကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး တည်ချက်သည်“ မင်းဒီကိုရောက်လာတာနဲ့ငါတို့ကိုမင်းယူဖို့အပြုံးလေးပေးပါ” စက္ကူဓာတုပစ္စည်းများဖြင့်ရေသန့်စင်ရန် ၂၀၁၉ နောက်ဆုံးပေါ်ဒီဇိုင်း china poly dadmac အတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအလားအလာများကိုကြိုဆိုပါသည်။
ရေသန့်စင်ရာတွင် Polyaluminium Chloride ကိုမည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်း
21-07-20 တွင် admin မှ
polyaluminium chloride ဆိုတာဘာလဲ။ Polyaluminium Chloride (Poly aluminium chloride) သည် PAC ၏အတိုကောက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သောက်ရေသန့်၊ စက်မှုရေ၊ ရေဆိုး၊ အရောင်ဖယ်ရှားခြင်းအတွက်မြေအောက်ရေသန့်စင်ခြင်း၊ COD ဖယ်ရှားခြင်းစသည်တို့အတွက်ရေသန့်စင်သောဓာတုအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ၎င်းကို floccula အမျိုးအစားအဖြစ်မှတ်နိုင်သည်။
မကြာသေးမီက၊ ငါတို့သည်ဆေးမှင်ဖျော့ဖျော့နှင့်အခြားထုတ်ကုန်များကိုစနစ်တကျလေ့လာခဲ့သည့်သင်ယူမှုမျှဝေခြင်းအစည်းအဝေးတစ်ခုကိုစီစဉ်ခဲ့သည်။ အခင်းဖြစ်ပွားရာမှအရောင်းသမားတိုင်းဂရုတစိုက်နားထောင်ပြီးမှတ်စုများယူခဲ့ကြပြီးသူတို့ကအများကြီးအမြတ်ရခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ သန့်ရှင်းတဲ့ရေသန့်ထုတ်ကုန်တွေအကြောင်းအကျဉ်းချုပ်မိတ်ဆက်ပါရစေ။
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ၊ ဒါက yixing cleanwater chemicals co ။ ltd မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဇွန်လ ၂၁ ရက်နံနက် ၉ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိတရုတ်အချိန်၌ကျွန်ုပ်တို့သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုသည်ဇွန်လတွင်ကြီးမားသောမြှင့်တင်ရေးအကြောင်းဖြစ်သည်။ ဓာတုထုတ်လုပ်သူသည်အကြီးမားဆုံးသောအမြတ်ကိုရရှိသည်။ Water Decoloring Agent + PAM = More Discount ...
clean wat polyamine လက်ကား
ဤထုတ်ကုန်သည်ကွဲပြားသောမော်လီကျူးအလေးချိန်မတူညီသောမော်လီကျူးအလေးချိန်ရှိသောအရည်များနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းမျိုးစုံတွင်အရည်-အစိုင်အခဲခွဲခြာလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အားဖြည့်အားဖြည့်ပေးသောအားဖြည့်ဓာတ်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ ၎င်းကိုရေသန့်စက်နှင့်စက္ကူစက်များအတွက်သုံးသည်။ ၎င်းကိုအပင်အတွက်အဓိကအသုံးပြုသည်။
cleanwat က ၁၄ ကြိမ်မြောက်ရှန်ဟိုင်းနိုင်ငံတကာရေကြောင်းပြပွဲသို့ဖိတ်စာတစ်စောင်ပို့သည်
21-06-02 တွင် admin မှ
၂၀၂၁ ခုနှစ်ဇွန်လ ၂ ရက်နေ့တွင် ၁၄ ကြိမ်မြောက် Shanghai International Water Exhibition ကိုတရားဝင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ လိပ်စာသည်ရှန်ဟိုင်းအမျိုးသားကွန်ဗင်းရှင်းနှင့်ပြပွဲစင်တာတွင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏နံပါတ် - Yixing Cleanwater Chemicals Co. , Ltd သည် 7.1H583 ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပါ ၀ င်ရန်ရိုးသားစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။ ထုတ်ကုန်ဟောင်းများ ...
ထုတ်ကုန်အသစ်ဖြန့်ချိခြင်း - စျေးနှုန်းနှင့်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော Defoamer
1. defoamer ကို polysiloxane၊ ပြုပြင်ထားသော polysiloxane၊ silicone resin၊ အဖြူရောင်ကာဗွန်အမည်းရောင်၊ dispersing agent နှင့် stabilizer စသည်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၃။ ရေမြှုပ်နှိမ်နင်းရေးစွမ်းဆောင်ရည်သည်ထင်ရှား။ ၄။ လွယ်ကူသည်။